Diddaa dhimma Finfinnee ilaalchise gorsa tarsiimoo jawaar muhaammad irraa barattoota yuniversitiif – Welcome to bilisummaa
Diddaa dhimma Finfinnee ilaalchise gorsa tarsiimoo jawaar muhaammad irraa barattoota yuniversitiif
Falmaa deemsifamaa jiru daran milkeessuuf qabxiilee armaan gadii qalbifachuun barbaachisaadha.
1) Mormii nagaa ( nonviolent resistance) godhuuf erga murteeffattanii, hamma danda’ame hundaan tarkanaafilee hokkaraa ( violence) akka hin jiraanne:
2) Gaafilee ifaafi gabaaboo ta’an dhiheeffadhaa.
Gaafiin mirgaa Oromoon mootummaa sanirraa qabu hedduudha. Garuu akkuma biddanas kutannaa xixiqqoon fixan, qabsoonis akkasuma. Amma gaafin kaaftan kan Finfinneeti. Gaafile gama biroo ammaaf moggatti kaayuun dhimma kanarratti gaafile muraasa baafatanii socho’uu feesisa.
4) Dhaadannoolee saboota biroo maqaa dhahan, rifachiisaniifi shakkisiisan hin fayyadaminaa. Ammas dhaadannooleen isin qabattan kan gaafilee muummee lafa kaawwattaniin ala akka hin taane. Yeroo takkatti dhimma tokko, diina tokkorratti fuulleffachuu qabna. Milkaa’aa, goobaan galaa!
Previous BIYYALAATTIS NU QOCHISIIFACHUU FEDHUU?
Next Iccitii “Master planii” TPLF isa 2ffaa.